प्रधानमन्त्रीज्यू समयमै दिमाग र आँखा खोल्नुहोस, नत्र चिकित्सक संघ चुप लागेर बस्दैन् ः अध्यक्ष डा. श्रेष्ठ – Esancharpati
प्रधानमन्त्रीज्यू समयमै दिमाग र आँखा खोल्नुहोस, नत्र चिकित्सक संघ चुप लागेर बस्दैन् ः अध्यक्ष डा. श्रेष्ठ
सत्तारुढ दल नेकपाका नेता एवम् प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेज सञ्चालक समितिका सचिव डा. रामकुमार अधिकारीले डा. गोविन्द केसीले राजनीतिक माग राखेर १६ औं अनशन बसेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले भने,‘डाक्टर केसीले राख्नुभएको ६ बुँदे मागमा स्वास्थ्य क्षेत्रबारे केही माग छैन् । उहाँले प्रष्टसँग राजनीतिक माग राख्नुभएको छ ।’
प्रदेश नम्बर ३ का सदस्यसमेत रहेका उनले डा. केसी सरकारी जागिरे भएकोले उनले निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउनुपर्यो भनेर माग राखेको पनि सुनाए । उनले थपे,‘उहाँपनि सरकारी जागिरे हो नि, उहाँले हत्यारा पत्ता लगाए भैगयो नि त।’ त्यस्तै उनले डाक्टर केसीले विदेशीको बुँई चढेर द्वन्द्वकालको मुद्दा उठाएको पनि आरोप लगाए ।
सांसद अधिकारीले डाक्टर केसी अहिले देशी तथा विदेशी शक्तिको पञ्जामा परेको पनि आरोप लगाए । उनले भने,‘गोविन्द केसीलाई साझा विवेकशीलका नेताहरुले बोकेका थिए । तर, अपराध वा पाप लागेको छ । साझा विवेकशील पार्टी छिन्न भिन्न भएको छ ।’
गोविन्द केसीलाई उनले बधाईसमेत दिए । अधिकारीले भने,‘म गोविन्द केसीलाई बधाई दिन चाहन्छु, अब मनमोहन मेडिकल कलेज काठमाडौं आउँदैन् । तपाईहरु सफल हुनुभयो । हामी त मर्यौं । मर्यौं । २ अर्ब ऋण छ । बिक्रि भएर ऋण तिर्न पुगे त तिरौंला नभए जेलमा बास होला ।’
नेपाल चिकित्सक संघका पूर्व अध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसीले डाक्टर गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेकोले वर्तमान सरकारले राजिनामा दिनुपर्ने माग गरे । उनले भने,‘हिजो सरकारले लम्पसार परेर सम्झौता गर्यो, तर आज आएर सम्झौता कार्यान्वयन गरेन । नैतिकताका आधारमा पनि यो सरकारले राजिनामा दिनुपर्छ ।’
उनले अनशनरत डाक्टर केसीको जीवनरक्षा गर्न सरकारसँग माग गरे । त्यस्तै केसीसँग भएको सम्झौता अक्षरंश पालना गर्नुपर्नेपनि उनले बताए । मेडिकल क्षेत्र र शिक्षाको सुधारको लागि छुट्टै मेडिकल विश्वविद्यालय चाहिनेपनि उनको भनाई छ । उनले थपे,‘मेडिकल क्षेत्र सुधारको लागि माथेमा आयोगको प्रतिवेदन राम्रो र उत्कृष्ट छ । तर, त्यो प्रतिवेदन पूर्ण होईन । यसको लागि मेडिकल युनिभर्सिटी आवश्यक हुन्छ ।’
चैत २९ गते ११ संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विशाल सभासहित अन्तरक्रिया गर्ने
सरकारले ईन्जिनियरहरुको कुरै सुनेन : ई. पोखरेल